ကွန်ပျူတာနှင့် အလုပ်လုပ်ကြရာဝယ် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Computer & Cell Phone » ကွန်ပျူတာနှင့် အလုပ်လုပ်ကြရာဝယ်
Posted by Yin Nyine Nway on Sep 24, 2010 in Computer & Cell Phone |4comments
computer CPU ကွန်ပျူတာနှင့် အလုပ်လုပ်ကြရာဝယ်
အခုဆိုလျှင် အဖိုးထိုက်တန်လှတဲ့ မျက်စိများအတွက် စိတ်ချလက်ချ ဖြစ်နိုင်သလို Computer နှင့် အလုပ်လုပ် ခြင်း လုပ်ငန်းများမှာလည်း အလုပ်တွင်နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်…။
(ဟနစံ ၏ ကွန်ပျူတာနှင့်အလုပ်လုပ်ကြရာဝယ်…) စာအုပ်အား ကူးယူဖော်ပြထားပါသည်။
နောက်ဆိုနေ့တိုင်း ဖုန်သုတ်ပါတော့မယ် . . . ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော် . . .
ကျနော် သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်က ကွန်ပျူတာနဲ့ အလုပ်လုပ်တယ်လေ…. နေ့တိုင်းကွန်ပျူတာ သုံးရတာပေါ့။ မနေ့က သူကတောင်ပြောသေးတယ်။ မျက်ရိုးတွေကိုက်လာလို့ တဲ့ ။ဒါနဲ့ ဆေးခန်းသွားပြတာ ဆရာဝန်က မျက်စိစမ်းသပ်စက်တွေနဲ့ စမ်းပြီး ပါဝါ ၂၀၀ ရှိတယ်ပြောတယ်။ ဒါနဲ့ သူလဲ ဆေးခန်းမှာ ပါဝါထည့်ပြီးစမ်းကြည့်တော့ ကြည့်ရတာပိုဝါးသွားတယ်ပြောတယ်။ ဒါနဲ့ သူလဲ မျက်မှန်မလုပ်တော့ ဘဲ ပြန်လာခဲ့တယ်။ သူ့ကို ဒီ ပိုစ့် အကြောင်းလေး ပြောပြလိုက်မယ်။ နောက်ထပ် ဘယ်လိုလုပ်သင့်တယ်ဆိုတာလေး သိရင်ပြောပေးပါဦး
YNN > ဒီပို့ စ်အတွက်ကျေးဇူးနော်။
kyansitthar > ကျွန်မတုန်းကလည်း ဆေးခန်းပြတာ ဘယ်ပါဝါ နဲ့ မှ မကိုက်ဘူး။ နောက်ဆုံး စလင်ဒါ ရော ပါဝါပါ တွဲမှ မျက်မှန်က အဆင်ပြေတော့တယ်။
အရင်ပြတဲ့ ဆေးခန်းအဆင်မပြေ ရင် နောက်ဆေးခန်း တစ်ခုပြောင်းပြ ကြည့်ပါလား။